Madheshvani : The voice of Madhesh - संशोधनबाट बढी त्रसित हुनुको मतलब संविधान समाप्तिको यात्रातर्फ जानु हो : हृदयेश त्रिपाठी (अन्तर्वार्ता )
संयोजक, स्वतन्त्र राजनीतिक समूह
० तपाइँहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गर्ने कुरा थियो, त्यो कहाँ अड्कियो त ?
— नेकपासँग हाम्रो पटक–पटक सम्वाद भएको हो र हुँदै पनि छ । त्यो विकल्प सम्पूर्ण रूपमा बन्द नै भइसकेको भनेर भन्न मिल्दैन । निर्वाचनपश्चात् देशमा परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भलाई विश्लेषण नगरी आगामी दिनका योजना र राजनीतिक कार्यक्रम बनाउन सकिँदैन । निर्वाचनको नतिजासँग एउटा भावना र मनोविज्ञान जोडिएको थियो । तर, अहिले आएर समग्र देशमै मनोविज्ञानमा परिवर्तन भएको छ । दुईटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकीकृत भए, जसको संयोजनको काम अहिलेसम्म उहाँहरूले गर्दैछन् । त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका सन्तुष्टि÷असन्तुष्टिका रेखाहरू कोरिएका छन् । नेपाली कांँग्रेस पनि महासमितिको तयारीमा छ । उ पनि निर्वाचनको नतिजाप्रति हतप्रद भएको छ । कांग्रेसमा वैचारिक समस्या देखिएको छ । गुटको समस्या सतहमा देखिएको छ । त्यस्तै, मधेशवादी दलहरू पनि हिजो निर्वाचनमा जस्ता थिए, आज रहेन । निर्वाचनको समयमा विशेषगरी एमालेको विरूद्धमा उभिएर राजनीतिक मत संकलन गरेका दलहरू त्यही पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन्, कोही सहभागी पनि छन् । फोरम त सहभागी नै छ, राजपाले समर्थन गरेको छ । राप्रपा लगायतका पार्टीहरूले फेरि एकचोटि हिन्दू कार्ड प्रयोग गर्दै फेरि राजालाई फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने ध्ययका साथ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । यी समग्र विषयको विश्लेषणहरू गर्न जरूरी छ । ठूलो विमतिका साथ यो संविधान जारी भएको हो र त्यो विमति कायमै छ । संविधान अनुकूलका विभिन्न कानूनहरू बन्ने प्रक्रिया केही अगाडि बढ्यो भने केही बाँकी नै छ । प्रदेशहरू अहिले असहाय अवस्थामा हिंडिरहेका छन्, स्थानीय तहमा बजेटहरू गएका छन्, विवेक र विचार गएको छैन । समग्र नेपालकै अर्थ प्रणालीको विषयमा भन्नुपर्दा ६ प्रतिशतभन्दा बढी विकास खर्च हुन सकेको छैन । यो समग्रतामा हामी विचार विमर्श गर्छौं । नेपाल–भारतका प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनको अवस्था के छ, त्यसमा उठाइएका विषयहरूले हामीलाई कसरी असर गर्छ, विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई (चाहे नेपालमा होस् वा भारतमा) ती सबै समग्र विषयमा हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।
— हाम्रो कुनै पनि शर्त छैन । मधेशी र थारू जनतामा नेकपा लोकप्रिय हुन सकेन, यसको ऐतिहासिक कारणहरू छन् । वि.सं. २०१५ सालको निर्वाचनमा भन्ने हो भने २ वटा सिट पाटन र पाल्पाबाट र २ रौतहटबाट मात्रै कम्युनिष्ट पार्टीले जितेको थियो । पछि आएर के कारणले लोकप्रिय हुन सकेन, त्यसको विवेचना गर्न र मधेशलाई बुझ्न वि.सं. २०४९ सालमा स्व.मदन भण्डारीले एउटा कार्यदल बनाउनुभयो । उहाँले बुझ्नुभयो कि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मधेशसँग जोड्न सकिएन । तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनले आफ्नो प्रतिवेदनमा मधेशका सवालहरू राखेको थियो । तर, उहाँको अवसानपछि त्यो विचारको पनि अवसान भयो र त्यो कार्यदलको पनि अवसान भएर गयो । माओवादीको जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दा विस्तारका लागि विभिन्न जातीय मोर्चाहरू बनायो तर पछिल्लो चरणमा जब संविधान जारी गर्ने बेलामा ती पार्टीहरूले लिएका पूराना अडानमा पनि कायम रहन सकेनन् । भन्न खोजिएको के हो भने नेकपा पार्टी आफैमा मधेशी र थारू जनतामा लोकप्रिय किन हुन सकेन भन्ने सोच्नु उहाँहरूको जिम्मेवारी हो । उहाँहरूले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । वि.सं. २०१७ सालपछि बढी प्रहारको निशाना कांँग्रेस भयो । काँग्रेसको कर्मभूमि नै मधेश रह्यो । त्यसैले काँग्रेस जोडिएको छ त्यहाँ । अझ पनि २८ देखि ३० प्रतिशत मत मधेशमा काँग्रेसको सुरक्षित छ । तर, ७० प्रतिशत मत काँग्रेसबाहिर छ । त्यसलाई आकर्षित गर्न सक्ने नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र व्यवहार नेकपासँग छैन ।